အလုပ်ထဲကလူနဲ့ ချစ်သူမဖြစ်ခင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အရင်မေးရမယ့် မေးခွန်း (၆) ခု
ရုံးထဲမှာ ရှိသမျှလူနဲ့တွဲတယ်၊ အကျူစိန်လို့ နာမည်ထွက်တဲ့လူလား?
အချစ်ဆိုတာကြီးက ဟိုလူ့ကိုချစ်မယ်၊ ဒီလူ့ကိုချစ်မယ် ဆိုပြီးတော့ ရွေးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ နှလုံးသားက သူ့အလိုလို ရွေးချယ်သွားတာ။ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ကိုလည်း ချစ်မိချင် ချစ်မိမှာပဲ။ ကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းကလူကိုလည်း သဘောကျမိတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းကလူကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကို အရင်ဆုံး ပြန်မေးရမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးပြီး အဆင်ပြေမှ တွဲတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူနဲ့ကိုယ်က ရာထူးတူတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် မတိမ်းမယိမ်း အဆင့်လောက်ဆိုရင် သိပ်ပြဿနာမရှိဘူးလို့ ယူဆရမယ်။ သူက ကိုယ့်ထက် ရာထူးအများကြီးမြင့်နေရင်တော့ တစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီဆို ကိုယ်ပဲနစ်နာရမှာ မမေ့ပါနဲ့။ သူတို့က အလွယ်တကူရှောင်လို့ရတယ်။ ကိုယ်ပဲခံရမှာ။
၂။ လူတွေသိရင် ဘာဖြစ်မလဲ
တချို့အလုပ်တွေက လုပ်ငန်းခွင်ချင်းတူသူကို ချစ်သူမထားရဘူးလို့ တားမြစ်ထားတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်တွေချိန်းတွေ့တာကို လူမိသွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘာမှမဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူနဲ့ချိန်းထားတာကို ရွှေ့လိုက်ပါဦး။
၃။ သူနဲ့အလုပ်ထဲမှာ အမြဲတွေ့နေရတာလား
သူနဲ့ကိုယ်က အလုပ်သဘော ဆက်စပ်နေမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ? သူ့စားပွဲဆီ ကိုယ်က တစ်နေ့ကို ဘယ်နှခေါက်လောက် သွားနေရလဲ? ခဏခဏတွေ့နေရလို့ပဲ မြင်ပါများပြီး စိတ်ဝင်စားမိကြတာလား? ဒါတွေသိမှ တကယ်တွဲသင့်၊ မသင့် စဉ်းစားရမယ်။
၄။ သူက ရုံးမှာနာမည်ကြီးလား
ရုံးထဲမှာ ရှိသမျှလူနဲ့တွဲတယ်၊ အကျူစိန်လို့ နာမည်ထွက်တဲ့လူလား? ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွဲလိုက်လို့ ကိုယ့်အနေနဲ့ ထွေထူးပြီး လူပြောခံရစရာတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျူကျူစိန်ကို တကယ်ကြွေမိရင်တော့ ကိုယ်ပဲခံစားသွားရမှာဆိုတာ ကြိုတွက်ထားပါ။
၅။ သူ့မှာ တခြားလူရှိလား
အလုပ်ထဲမှာတော့ လူလွတ်လို့ ပြောထားတာပဲ။ အပြင်မှာ ရည်းစားရှိနေလား၊ အိမ်ထောင်ရှိနေလားဆိုတာလည်း စုံစမ်းပါဦး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စနိုက်ကြော်ဘဝမျိုး မရောက်ချင်စမ်းပါနဲ့။ တွဲရမယ့်လူတွေ အများကြီးပဲဥစ္စာ။ တခြားလူကိုရွေး။
၆။ လူတွေပြောလာခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ဒါလည်း ကြိုတွေးရမယ်။ လူတွေကတော့ ကောင်းလည်းပြောမှာပဲ၊ ဆိုးလည်းပြောမှာပဲဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ အဲ့ဒီလိုတွေ ပြောလာခဲ့ရင် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုပါ ကြိုတွေးပြီးမှ သူနဲ့ဇာတ်လမ်းစပါလို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ်နော်။